Nandresy izahay! | Martech Zone
Tamin'ny volana Aogositra lasa teo dia nanoratra momba ny asa vaovao at Patronpath. Naharitra 8 volana ny fanamby tao Patronpath saingy hita hatrany hatrany ilay orinasa. Ny telovolana voalohany dia lehibe kokoa noho ny tamin'ny taon-dasa ary ny mpanjifanay dia manana fitomboan'ny tarehimarika indroa anatiny amin'ny alàlan'ny vahaolana amin'ny marketing sy ny ecommerce.
Omaly alina, nandresy ny isika Mira Awards ho an'ny orinasan-gazety Gazelle Technology Technology an'ny Indiana!
Ny ampahany tena sarotra amin'ny ezaka ataontsika dia ny fampidirana amin'ireo rafitra Restaurant POS. Misy mpivady ihany ao amin'ny indostria manararaotra ireo teknolojia vaovao - ny ankamaroan'ny hafa dia mbola eo amin'ny tontolon'ny fisie batch, Access Databases ary na i FoxPro aza. Manana rafitra tsara napetraka izahay amin'ny fanatanterahana an'io izay tsy mitovy amin'ny vahaolana sisa ary mirehareha amin'ny fampidirana POS izahay.
Isika ihany koa dia manana saika ao amin'ny fantsom-panatanterahana raha miaina! Izany no nahatonga ahy hiasa mihoatra ny fotoana amin'ny automatisation sy ny fanatsorana ny fampiharana. Soa fa manana ekipa tsara isika ao amin'ny Patronpath. Mark Gallo, Filoha, dia mahatakatra ny indostria anatiny sy ivelany. Chad Hankinson no mpivarotra tsara indrindra niarahako niasa - tsy nijanona mihitsy izy rehefa vita ny fivarotana - manohy miasa miaraka amin'ireo mpanjifany izy amin'ny fampiharana azy ireo sy ny sisa. Ny mpiasanay farany indrindra dia i Tammy Heath, mpitantana kaonty ary i Marty Bird, talen'ny marketing.
Tammy dia mpitantana kaonty mahafinaritra izay miahy ny mpanjifany. Marty dia andriamanitra ho ahy manokana, satria izy nandamina sy nanangana ny programa mailaka mailaka ary miasa mba handaminana ny asantsika anatiny amin'ny alàlan'ny fampiharana Salesforce miaraka amin'ireo fitaovantsika ankehitriny, Google Apps ary ExactTarget.
Tsy mijanona eo ihany koa ny ekipa. Kristian Andersen sy ny mpiara-miasa aminy nanome antsika an fisian'ny tranonkala sy marika mahafinaritra. Ary manohy mahazo consultation mitohy avy amin'ny birao izahay - izay mitantana orinasa toa izany Autobase, FahasalamanaX, Banky Internet voalohany ary RICS Rindrambaiko.
Valandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety: Patronpath dia nahazo ny loka Techpoint MIRA
Tags: fikarohana any an-toeranaMediaLohasahan'i MediaMilomilo makaSilicon ValleySilicon Valley Watcherrohy fampisehoanafaran'ny herinandro fanombohana
2008 NRA Tech Pavilion nasongadina tamin'ny fampisehoana nomerika
May 17, 2008 ao amin'ny 3: 58 PM
Douglas, arahabaina! Niasa tao amin'ny POS aho ary fantatro fa sarotra izany mba ahafahako mankasitraka ity loka ity sy ny lanjan'ny orinasa iray…
May 17, 2008 ao amin'ny 8: 35 PM
Woo-Hoo! Loka mahafinaritra sy mendrika, Doug. Ny fihaonana taminao tao amin'ny NRA no tena zava-dehibe tamin'ny ekipa Kwingo.
Ny sasany amintsika dia mamorona zavatra adala; ny sasany amintsika dia mamorona zavatra mahasoa. Mamorona ny zavatra mahasoa ianao - tsara aminao
May 18, 2008 amin'ny 10: 10 AM
Arahabaina! Toa nisy vokany tokoa ny ezaka nataonao.
May 18, 2008 ao amin'ny 1: 49 PM
May 18, 2008 amin'ny 11: 03 AM
Arahabaina ry Doug! Tena zava-bita mahatalanjona tokoa izany!